Doorashooyin qof iyo cod ah oo ka billowday PUNTLAND - Caasimada Online
Home Warar Doorashooyin qof iyo cod ah oo ka billowday PUNTLAND
Doorashooyin qof iyo cod ah oo ka billowday PUNTLAND
Garoowe (Caasimada Online) – Shacabka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada maamulka Puntland ayaa maanta u dareeray doorashooyin taariikhi ah oo ah qof iyo cod, isla-markaana lagu dooranayo golayaasha deegaanka ee sadex demo.
Doorashadan oo ah mid tijaabo, isla-markaana isha lagu wado hayo ayaa ka bilaabatay degmooyinka kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
Waxaa codadkooda dhiibanaya dad gaaraya 37,578 qof oo isku diiwaan-geliyey codoeynta doorashadan, kuwaas oo ka codeynaya 54-goob oo loo diyaariyey.
Sidoo kale waxaa kuraastaasi oo tiradooda guud ay tahay 87 isku soo sharraxay illaa 449 musharax oo maalmihii u dambeeyey olole xoogan ka waday Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
Dhinaca kale guddiga KMG ah ee doorashada qof & codka ah ayaa shacabka ka dalbaday in ay raacaan habraaca loogu talagalay in ay u dhacdo codeynta tijaabada ah.